Maxay ka wada hadleen madaxweyne Qoor Qoor iyo Macalin Maxamuud ? (Akhriso) – Radio Daljir
Maxay ka wada hadleen madaxweyne Qoor Qoor iyo Macalin Maxamuud ? (Akhriso)
Maarso 1, 2020 7:03 b 0
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye (Qoor Qoor) ayaa maanta la kulmay hoggaamiyaha Guud ee Ahlusunna Macalin Maxamuud Sheekh Xasan.
Kulankan ayaa yimid kadib markii uu Hoggaamiyaha Ahlu Sunna uu sheegay inay tanaasuleen oo ururka Ahlu Sunna ka baxayo arrimaha Siyaasadda ayaa Madaxweynaha Galmudug waxa uu ka mahadceliyay mowqifka cusub ee ururku uu qaatay.
Duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday Ceel-Waaq oo lala beegsaday Shirkada Hormuud